Nusratul Islaam Oo bogaadisay Weerarkii weynaa ee Bellidoogle.(Tarjamo) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Nusratul Islaam Oo bogaadisay Weerarkii weynaa ee Bellidoogle.(Tarjamo)
On Nov 10, 2019 586 0
Kalimad cusub oo uu jeediyay hogaamiyaha Jamaacada Nusratul Islaam wal Muslimiin Sheekh Iyaad, ee ka dagaalanta wadamada Saaxilka iyo Saxaraha Africa, ayuu kaga hadlay weerarkii weynaa ee Bellidoogle, ee lagu dilay inkabadan 121 askari oo Maraykan ah.
Kalimadan oo la dhageysan karo qadar 6 daqiiqo ah, islamarkaana ay baahisay Mu’assasada Az-Zallaaqa ayuu sheekh Iyaad si kal iyo laab ah wuxuu u hambalyeeyey weerarkii Bellidoogle, kaas oo uu sheegay iney aad ugu farxeen Muslimiinta.
“Duulaankaas kahor iyo kadiba, waxaan idin kugu hambalyeynayaa walaalihiina sharafta badan ee sugan Soomaaliyada wax bixinta iyo ballan oofinta badan, kuwaas oo uu Alle ku manneystay guul iyo furasho muuqata, kadib markii howlgal qorsheysan ku qaadeen saldhiga ciidamada Maraykanka ee Soomaaliya, halkaas oo ay ku gumaadeen kuwa caabuda Saliibka iyo xulafadooda Sahyuuniyadda, Allaah ayay Mahadi u sugnaata, hadana Allaah ayaa mahad iska leh” ayuu yiri Sheekh Iyaad.
Kalimada wuxuu sidoo kale kaga hadlay weerar weynaa oo dhawaan ciidamada Nusratul Islaam wal Muslimiin ku dileen askar aad u badan oo katirsan kuwa xukuumadda Maali.
Halkan ka dhagayso Tarjamada kalimadda Amiirka Nusratul Islaam oo ka hadlay weerarkii Bellidoogle